Onye chepụtara - Okwu Okwu • Banyere Harold Waldwin Percival
Dị ka Harold W. Percival kwuru na Onye edemede dere okwu mmalite nke Echiche na Mbibi, ọ họọrọ idebe onye dere ya n’azụ. Ọ bụ n'ihi nke a ka ọ chọghị ide akụkọ ndụ ya ma ọ bụ ka e dee akụkọ ndụ ya. Ọ chọrọ ka ihe odide ya guzoro nke aka ya. Ebumnuche ya bụ ka njirimara ya ghara ịdaba na njirimara ya, kama nwale ya dabere na ogo nke onwe onye n'ime onye ọ bụla na-agụ ya. Ka o sina dị, ndị mmadụ chọrọ ịma ihe banyere onye dere akwụkwọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha metụtara ihe odide ya.
Ya mere, ekwuru okwu ole na ole gbasara Maazị Percival ebe a, nkọwa ndị ọzọ dịkwa na ya Okwu Onye edemede. A mụrụ Harold Waldwin Percival na Bridgetown, Barbados n'April 15, 1868, n'osisi nke nne na nna ya. Ọ bụ nwa nke atọ n’ime ụmụaka anọ, ọ dịghị onye ọ bụla n’ime ha nwụrụ. Ndị mụrụ ya, Elizabeth Ann Taylor na James Percival bụ ezigbo Ndị Kraịst; ma ọtụtụ n'ime ihe ọ nụrụ mgbe ọ bụ obere nwa dị ka ihe ezi uche dị na ya, enweghịkwa azịza na-eju afọ maka ọtụtụ ajụjụ ya. O chere na a ga-enwerịrị ndị ma, na mgbe ọ dị obere, o kpebiri na ya ga-achọta "ndị maara ihe" ma mụta ihe n'aka ha. Ka ọtụtụ afọ gafere, echiche ya banyere "Ndị Maara Ihe" gbanwere, mana ebumnuche ya iji nweta ihe ọmụma Onwe ya nọgidere.
Mgbe ọ dị afọ iri, nna ya nwụrụ na nne ya kwagara United States, biri na Boston, mesịa gaa New York City. Ọ lekọtara nne ya ihe dị ka afọ iri na atọ ruo mgbe ọ nwụrụ na 1905. Percival nwere mmasị na Theosophy ma sonye na Theosophical Society na 1892. Obodo ahụ kewara abụọ mgbe ọnwụ William Q. Judge na 1896. Maazị Percival mechara hazie Theosophical Society Independent, nke zutere iji mụọ ihe odide nke Madame Blavatsky na "akụkụ Akwụkwọ Nsọ" nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ.
Na 1893, na ugboro abụọ ọzọ n'ime afọ iri na anọ sochirinụ, Percival ghọrọ “onye maara nke uche,” O kwuru na uru nke ahụmịhe ahụ bụ na ọ mere ka ya mata banyere isiokwu ọ bụla site na usoro ọgụgụ isi ọ kpọrọ ezigbo iche echiche. O kwuru, sị, “consciousmara Nkata na-ekpughe ihe 'amaghị' nye onye ahụ nke maara ihe.”
Na 1908, na afọ ole na ole, Percival na ọtụtụ ndị enyi nwere ma rụọ ọrụ ihe dị ka narị hekta ise nke ubi mkpụrụ osisi, ala ubi, na cannery ihe dị ka kilomita iri asaa n'ebe ugwu nke New York City. Mgbe e rere ala ahụ, Percival debere ihe dị ka iri asatọ acres. Ọ bụ ebe ahụ, na nso Highland, NY, ebe o bi n'oge ọnwa ọkọchị ma tinye oge ya n'ọrụ na-aga n'ihu na ihe odide ya.
Na 1912 Percival malitere ịkọwapụta ihe maka akwụkwọ iji nweta usoro echiche ya zuru oke. N'ihi na ahụ ya ga-adị jụụ mgbe ọ na-eche echiche, ọ na-ekwupụta oge ọ bụla enyemaka dị. Na 1932, edechara akwụkwọ mbụ ahụ wee kpọọ ya Iwu Echiche. O nyeghị echiche ma ọ bụ mee mkpebi. Kama nke ahụ, ọ kọọrọ ihe ọ maara banyere ya site na iche echiche echebara echiche. A gbanwere aha ya ka ọ bụrụ Echiche na Mbibi, emesiri ebiputa akwukwo a na 1946. Ya mere, edere ihe di otu puku peeji a nke na-enye nkowa di nkpa banyere mmadu na mmekorita anyi na cosmos na nke ozo weputara n’ime oge iri ato na ato. N'ikpeazụ, na 1951, o bipụtara Nwoke na Nwanyi na Nwa na, na 1952, Masonry na Ihe Atụ Ya—Na Ìhè nke Echiche na Mbibi, na Ndi ochichi onye kwuo uche ya bu ochichi nke onwe.
Site na 1904 ruo 1917, Percival bipụtara magazin ọnwa, Okwu ahụ, oro ama asuana ke ofụri ererimbot. Ọtụtụ ndị edemede a ma ama nke ụbọchị nyere aka na ya, yana nsogbu niile ahụ nwere isiokwu site na Percival. Edere ederede ndị a na nke ọ bụla na mbipụta 156 wee nweta ya ebe Ònye bụ onye na America. Okwu Foundation bidoro usoro nke abụọ Okwu n’afọ 1986 dị ka otu magazin kwa ọnwa nke dịịrị ndị otu ya.
Maazị Percival nwụrụ na ebumnuche ebumpụta ụwa na Machị 6, 1953 na New York City. A kpọrọ ozu ya ọkụ dị ka ọchịchọ ya si dị. E kwuwo na ọ dịghị onye nwere ike izute Percival na-enweghị mmetụta na ya zutere mmadụ dị ịrịba ama n'ezie, na enwere ike ịnwe ike na ikike ya. N’amamihe ya nile, ọ nọgidere bụrụ onye dị nwayọ ma nwee obi umeala, nwoke nwere obi eziokwu nke a na-apụghị imebi emebi, enyi na-ekpo ọkụ ma nwee ọmịiko. Ọ dị njikere mgbe niile inyere onye ọ bụla na-achọ aka aka, mana ọ naghị anwa ịmanye onye ọ bụla. Ọ bụ onye na-anụ ọkụ n'obi na-agụ akwụkwọ dị iche iche ma nwee ọtụtụ ọdịmma, gụnyere ihe ndị dị ugbu a, ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụnụba, akụkọ ihe mere eme, foto, ịkọ nri na nkà mmụta ala. E wezụga talent ya maka ide ihe, Percival nwere ikike mgbakọ na mwepụ na asụsụ, ọkachasị Greek na Hibru oge gboo; mana ekwuru na-egbochi ya ime ihe ọbụla ma ọbụghị nke ọ pụtara ìhè n’ebe a ime.
Harold W. Percival n'akwụkwọ ya na ederede ndị ọzọ na-ekpughe ezigbo ọnọdụ, na ikike, nke mmadụ.